Obama 'really impressed' with Pope's message of equality - News Fitsipika
Obama 'Tena gaga’ amin'ny Papa ny hafatry ny fitoviana
Papa François veloma ny vahoaka nandritra ny ankapobeny ao amin'ny St mpanatrika ny kianja Petera Janoary 29, 2014 tao amin'ny Vatican
US Ny Filoha Barack Obama mafy naneho fankasitrahana ny Papa François ho an'ny fampiroboroboana “ny tena fahatsapana firahalahiana sy ny mpirahavavy sy ny fiheverana ho an 'ireo izay sahirana,” tao anaty tafatafa nalefa Zoma.
“Efa tena nanaitra lavitra ny fomba ny toromarika izay Heveriko no fototry ny finoana kristianina,” Obama nilaza CNN ny eveka ambony indrindra izay nasiam-panovana dia ny endriky ny Eglizy Katolika satria ny fametrahana tamin'ny taon-dasa.
The US filoha, iza no hitsidika ny Vatican tamin'ny volana Martsa, Nilaza izy fa tsy nino i Francis miasa avy ny faniriana hahazo sitraka hatraiza hatraiza.
Fa, “Mihevitra aho fa be dia be izy misaintsaina ny finoany sy ny zavatra tokony hatao mba hahazoana antoka fa ry namana — tsy hoe momba ny finoana katôlika fa ny olona rehetra manerana izao tontolo izao — dia miaina ny hafatra avy izay heveriny fa mifanaraka amin'ny lesona 'i Jesoa Kristy,” hoy Obama.
“Izany ny fivoriana aho miandrandra ny,” dia nandroso ny nomanina Martsa 27 Mipetraha.
Obama dia nanao fiakaran'ny tsy fitoviana sy ny tolona ny Amerika afovoany an-trano fampianarana ny sonia olana ny faharoa teny.
Ao amin'ny kabary tamin'ny Desambra, Obama nidera ny fandresen-dahatra nandroso ny Papa François, voalohany tsy eoropeanina eveka ambony indrindra amin'ny efa ho 1,300 taona, amin'ny Rising ny tsy fitoviana eo amin'ny fiaraha-monina namaky teo anelanelan'ny tena faran'izay mahantra sy ny manan-karena.
“Ahoana no tokony ho, izy nanoratra, fa tsy vaovao iray, rehefa tsy manan-kialofana iray be taona ny olona maty ny hatsiaka, fa izany no vaovao, rehefa resy ny tsenam-hevitra roa?”
Papa François niady hevitra tao amin'ny fananarana, fa toy izany fitsipika nifanohitra nanamarika ny “raharaha ny fanavakavahana” Tsy mitovy velively amin'ny fiaraha-monina.
Ary tamin'ny Oktobra, Nilaza ny filoha CNBC fa izy “hugely Gaga” ny papa ny fanetren-tena sy fiaraha-miory ho an'ny mahantra.
Obama dia farany tany Vatican City in 2009, rehefa nihaona Papa Benedict.
17960	1 Barack Obama, Fiangonana Katolika, Pope, Etazonia
← Brad sy Angelina mba hifindra tany S.Africa ho an'ny sarimihetsika vaovao Radcliffe mitondra avy hatrany Marathon fiverenan'ny →